Amaphesenti angu-99.8% aphezulu e-alumina e-ceramic China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Ama-Tuber Ceramic > I-Alumina Tube Ceramic > Amaphesenti angu-99.8% aphezulu e-alumina e-ceramic
Ama-tubum a-alumina e-alumina ahlotshaniswa ngokucindezela okumile, kulula ukuthola ubuso obuhle kakhulu ngaphandle kokukhathazeka. Ngenxa yokuhlanzeka okukhulu kwe-aluminium oxide ye-ceramic tube ukuze kube ngu-99.8%. Yonke ithubhu ye-ceramic esiyinikezile inesakhiwo esihle kakhulu.
Njengoba u-99.5% we-alumina anezindawo ezinkulu ze-dielectric, ukumelana okuhle kwamakhemikhali nokubhujiswa, nokusebenza kagesi okuzinzile ngaphansi kwemali ephezulu kanye nesimo sezinga eliphezulu. Ukwenza abantu bakhethe lolu hlobo lwe-tube ceramic ukuze basebenzise njenge-insulator ye-ceramic emanzini kagesi kagesi.